HUAJING mgbochi mmiri mica ntụ ntụ mepụtara site na ezigbo mma mica scrap. N'oge n'ichepụta usoro nke ihicha, ịsa, tetara, ndinuak ke nnukwu nsogbu, ihicha na ala okpomọkụ, finer echetakwa, ọ ga-aghọ a ezigbo mma ndochi ịnweta. Usoro ọrụ ya pụrụ iche na-ejigide mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ dị na mica, akụkụ ya dị ukwuu, ndepụta dị elu nke refraction, ịdị ọcha dị elu & luster, obere ígwè & ájá ájá na ihe ndị ọzọ na-emepụta ihe.
Ala akọrọ mica ntụ ntụ nke Huajing bụ asọmpi na ọnụahịa ma kwụsie ike na mma. Igwe mica dị ọcha dị elu nke mepụtara site na-egweri na-enweghị agbanwe ihe ọ bụla. N'ime oge a na-emepụta ihe niile, anyị na-agbaso usoro ndochi zuru ezu iji jide n'aka na ngwaahịa ahụ dị mma;
Huajing ụlọ ihe onwunwe mica ntụ ntụ bụ usoro nke isi mica ngwaahịa esichara mica flakes si Lingshou, Hebei n'ógbè. Na urughuru size nke ngwaahịa ekpuchi nso nke 5mm ka 10um.The ọcha usoro e mepụtara nọgidere ruo ihe karịrị afọ 40. Ka ọ dị ugbu a, a na-ejikarị ya eme ihe n'ime mbadamba ime ụlọ, bọọdụ nkwụ na mpụga, ọkpọkọ nsị ọnụ, ihe owuwu ụlọ gburugburu ebe obibi, windo nchara windo na ibo ụzọ, marble artificial na na Na mkpuchi gbara akwụkwọ, ọ stably eji na-ewu ụlọ ọrụ, dị ka mputa mgbidi agba, ụzọ marking agba, plasta, arọ mgbochi corrosive agba.